BBC - Search results for zimbabwe
An overview of Zimbabwe including key facts, political leaders, historical timeline and notes on the media
…There is widespread jubilation in Zimbabwe's capital Harare, as people take…
House of Commons: Zimbabwe Urgent Question
…An urgent question in the House of Commons on the situation in Zimbabwe…
HARDtalk: Walter Mzembi, Minister for Tourism, Zimbabwe
…Sarah Montague speaks to Zimbabwe's tourism minister Walter Mzembi. His job…
ProgrammesBBC News Channel
…Zimbabwe's ruling party has sacked President Robert Mugabe as its leader…
…Zimbabwe's ruling party has sacked President Robert Mugabe as its leader… the president of Zimbabwe, although the Zanu PF move increases the pressure on him that has…
Zimbabwe's Zanu-PF meets to decide Mugabe future
…. Senior Zanu-PF officials have begun talks on whether to dismiss Zimbabwe's veteran…
…. Senior Zanu-PF officials have begun talks on whether to dismiss Zimbabwe's veteran… to be reinstated as vice-president when Zanu-PF convene. Mr Mugabe has led Zimbabwe since…
…. Senior Zanu-PF officials have begun talks on whether to dismiss Zimbabwe's veteran… to be reinstated as vice-president when Zanu-PF convene. Mr Mugabe has led Zimbabwe since…. Negotiators are poring through Zimbabwe's laws to find a legal way out. Saturday's call…
The Newsroom: Zimbabwe: Zanu-PF Leaders Deciding Mugabe Fate
…President Robert Mugabe's closest allies in the party are calling on him to…
…President Robert Mugabe's closest allies in the party are calling on him to step down. The party's youth league has piled further pressure saying Mr Mugabe…
…President Robert Mugabe's closest allies in the party are calling on him to step down. The party's youth league has piled further pressure saying Mr Mugabe must leave office. Also Argentina missing submarine: satellite signals detected…
…There is widespread jubilation in the capital Harare, as people take to the…
…There is widespread jubilation in the capital Harare, as people take to the streets calling on President Mugabe to stand down.…
HARDtalk: Joice Mujuru, Vice President of Zimbabwe 2004-2014
…Stephen Sackur speaks to Joice Mujuru, former vice president of Zimbabwe…
…Stephen Sackur speaks to Joice Mujuru, former vice president of Zimbabwe…. President Robert Mugabe of Zimbabwe is 93 years old. His wife recently suggested he…
…Stephen Sackur speaks to Joice Mujuru, former vice president of Zimbabwe…. President Robert Mugabe of Zimbabwe is 93 years old. His wife recently suggested he… could win re-election as a corpse, but failing that Zimbabwe needs to grapple…
… Zimbabwe's capital, Harare. Zimbabweans poured out to the streets carrying flags…
… Zimbabwe's capital, Harare. Zimbabweans poured out to the streets carrying flags… Freedom Square. "This is a new Zimbabwe, and freedom has finally come," she adds…
… Zimbabwe's capital, Harare. Zimbabweans poured out to the streets carrying flags… Freedom Square. "This is a new Zimbabwe, and freedom has finally come," she adds… the political crisis. Negotiators are poring through Zimbabwe's laws to find a legal way out…
… Grace as his successor. Mr Mugabe, 93, has led Zimbabwe since independence from…
… Grace as his successor. Mr Mugabe, 93, has led Zimbabwe since independence from… of the army and members of the governing Zanu-PF party. Veterans of Zimbabwe's war…
… Grace as his successor. Mr Mugabe, 93, has led Zimbabwe since independence from… of the army and members of the governing Zanu-PF party. Veterans of Zimbabwe's war… means to resolve the political crisis. Negotiators are poring through Zimbabwe's…